Bit By Bit - Sava lalana - Inona no vakina manaraka
Ny ranomainty (fizarana 1.1)
Ho fanazavana amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny tetikasa Blumenstock sy ny mpiara-miasa, jereo ny toko 3 amin'ity boky ity.
Tonga soa eto amin'ny taona nomerika (fizarana 1.2)
Gleick (2011) dia manolotra fomba fijery ara-tantara momba ny fiovan'ny maha-olombelona ny fanangonana, ny fitehirizana, ny famindrana ary ny fizotran'ny vaovao.
Ho an'ny fampidirana amin'ny vanim-potoana nomerika izay mifantoka amin'ny mety mety manimba, toy ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo, dia jereo ny Abelson, Ledeen, and Lewis (2008) ary Mayer-Schönberger (2009) . Ho an'ny fampidirana ny vanim-potoana nomerika izay mifantoka amin'ny fahafaha-manao, dia jereo ny Mayer-Schönberger and Cukier (2013) .
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fandefasana ny fanandramana amin'ny fomba fanao mahazatra, dia jereo ny Manzi (2012) , ary raha mila fanazavana bebe kokoa momba ireo orinasa manaraka ny fitondran-tena ao amin'ny tontolon'ny zavaboary dia jereo ny Levy and Baracas (2017) .
Ny rafitra fanabeazana alemana digital dia mety ho fitaovana sy fitaovana fianarana. Ohatra, azonao atao ny mampiasa ny media sosialy mba handrefesana ny hevitry ny besinimaro, na azonao atao ny mahatakatra ny fiantraikan'ny media sosialy amin'ny hevitry ny vahoaka. Amin'ny tranga iray, ny rafitra nomerika dia fitaovana izay manampy anao hanao fitiliana vaovao. Amin'ny toe-javatra iray hafa, ny rafitra nomerika dia fitaovana fianarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Sandvig and Hargittai (2015) .
Ny rafitra fikarohana (fizarana 1.3)
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fikarohana momba ny siansa sosialy ianao dia jereo ny King, Keohane, and Verba (1994) , Singleton and Straits (2009) , ary Khan and Fisher (2013) .
Donoho (2015) manoritsoritra ny siansa momba ny angona ho toy ny asan'ny olona mianatra amin'ny angona, ary manolotra tantara momba ny siansa momba ny angona, manamarina ny niaviana ara-tsaina amin'ny sehatra toy ny Tukey, Cleveland, Chambers, ary Breiman.
Ho an'ny andianà tatitra voalohany momba ny fikarohana fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika, jereo ny Hargittai and Sandvig (2015) .
Temp'ity boky ity (fizarana 1.4)
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fampifangaroana ny angon-databatra readymade sy custommade dia jereo ny Groves (2011) .
Raha mila fanampim-panazavana momba ny tsy fahombiazan'ny "fanamarinana," dia jereo ny toko faha-6 amin'ity boky ity. Ny teknika ankapobeny izay nampiasan'i Blumenstock sy ireo mpiara-miasa mba hampivelatra ny harenan'ny olona dia azo ampiasaina hanovozana toetra mahatsikaiky manokana ihany koa, anisan'izany ny firaisana ara-nofo, ny foko, ny fomba fijery ara-pinoana ary ny fampiasana ny zava-mahadomelina (Kosinski, Stillwell, and Graepel 2013) .